Posted by ညီလင်းသစ် au 25.9.08
“ဂရုမစိုက်တာ၊ အသိအမှတ်မပြုတာဟာ ရန်စခံရတာ၊ အမုန်းခံရတာထက် ပိုဆိုးပါတယ်” ဆိုတာကလေ မှန်သင့်သလောက်မှန်တယ်လို့ တော့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုရန်စနေပြီ(သိအောင်တစ်မျိုး၊ မထိတရိနဲ့ တစ်မျိုး) ဆိုရင်တော့ ဒါ ကိုယ့်ကိုသူ
အာရုံစိုက်နေလို့ ပဲကိုးနော်။ ဒါဟာ သူကိုယ့်အကြောင်းမတွေးပဲမနေနိုင်လို့ ဖြစ်ရတာမို့ ရင့်
ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ်သာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သွားပြန်ရင်လည်း လူတွေအာရုံစိုက်ခံရ
ခြင်းထက် ဥက္ခေပြုခံရခြင်းက ပိုအေးချမ်းတယ်ဆိုတာသိလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်မတို့ 
ဘာသာတရားမှာဆိုရင် ဥပေက္ခာတရားဟာ သူတော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးအဖြစ်ဘုရား
ဟောထားပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လည်း မိမိရဲ့ဇနီး၊ သား၊ နဲ့ မိဖဆွေမျိုးတွေကို
ဥပေက္ခာပြု ကျောခိုင်းပြီးတောထွက် တရားအားထုတ်ခဲ့မှ ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပါ။
ဒီလောကီလူ့ ဘောင်မှာကတော့ ကိုယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုခံရတာကို မကြိုက်တဲ့လူမရှိသ
လောက်နည်းမှာပါ။ ဒီသီတင်းလေးကိုကြားရတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိသား။ ဒီလူ
ဟာ သူ့ မွေးနေ့ မှာ လူတွေကို အလန့် တကြားဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် သူ့ မွေးနေ့ မှန်းသိစေ
ခဲ့ရလောက်အောင် သူ့ မှာအရင်းနှီးဆုံး ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မိဖညီအစ်ကို၊ မိတ်ဆွေတစ်ဦး
လောက်မှရှိမနေခဲ့လို့ လား။ ဒါမှမဟုတ် သူကိုယ်တိုင်က လူတွေကို ဒီလိုလုပ်ရတာပျော်တဲ့
စိတ်အခံရှိနေခဲ့လို့ လား မဆိုနိုင်ပေဘူး။ ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာကတော့ မွေးနေ့ ကိုအ
သိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတာမျိုးက အစကတည်းက ရှိနေခဲ့တာမဟုတ်တော့ အသိအမှတ်လာ
ပြုနေရင်တောင်မှ အိုးတို့ အန်းတန်းဖြစ်နေရဦးမယ်။ ကျွန်မငယ်စဉ်ကတော့ ကျွန်မရဲ့ဖခင်
ကကျွန်မမွေးနေ့ မှာ အထိမ်းအမှတ်သဖွယ်လေးဖြစ်ချင်သပဆိုရင် ကျွန်မသဘောအတိုင်း
လှူချင်တဲ့ပုဂ္ဂုလ်ကို လှူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ကျွန်မက လူသူအရောက်နည်း
တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသေးသေးလေးမှာပဲ ဘုန်းကြီးအတွက် ဆေးဝါးတို့ အသုံးအ
ဆောင်တို့ သွားလှူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ဆုပေးတဲ့ သာဓုခေါ်သံလိုမျိုးဟာ တကမ္ဘာလုံးက
၀ိုင်းကောင်းချီးပေးတာထက် ပိုပြီးပီတိဖြစ်စေခဲ့ဖူးတယ်လေ။ အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလိုအပ်သူ
အသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိပါစေ၊ ဥပေက္ခာကို လိုအပ်သူ ဥပေက္ခာကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ သာ ဆန္တပြု
ဟုတ်ပါတယ်...ကိလေသာကို ကြိုးစားပယ်ဖြတ် နေသူတွေ အဖို့တော့ ဥပေက္ခာတရားက ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ သင့်လျော်မှာပါ မယုဝရီရေ...။
ဘုန်းကြီးရဲ့ သာဓုခေါ်သံက မယုဝရီရဲ့ သဒ္ဒါတရားကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အသိအမှတ်ပြုလိုက် ခြင်းပါပဲ၊ ရေများ ရာမိုးရွာမယ့်အစား တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှူရ တာအင်မတန် မွန်မြတ်ပါတယ်။
ကိုညီလင်းသစ် ရဲ့ Post ရော၊ မမယုဝရီရဲ့ Comment ရောက Make Sense ဖြစ်လိုက်တာ။
နန္ဒာ့နဲ့ Related ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ဒီ Myanmar Blogs လောကထဲ နန္ဒာဝင်လာတာ6Months ရှိပြီ။
စဝင်ကထဲက အခုအချိန် အထိ ''အသိအမှတ်ပြုမှု့ (ACKNOWLEDGEMENTS)''ကို ရရှိသလို ''အတိုက်အခိုက်(ATTACK,CRITICIZE)'' ခံ နေရတာလဲ အခုအထိပါပဲ။
မမယုဝရီ ပြောသလို ကိုယ့်ကို Dislike ဖြစ်တဲ့သူက အမြဲ (ATTENTION) အာရုံစိုက်နေလို့ပဲ လို့ယူဆထားလိုက်တော့တယ်..,
မခံခြင်စိတ်ရှိပြီး Sensitive ဖြစ်တတ်တဲ့ လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ နန္ဒာ့အနေနဲ့ Maturity ဆိုတာလက်ကိုင်ထားပြီး Totally ဥပေက္ခာ (Ignore) ထားလိုက်ပါတယ်။
Blog လုပ်ပြီး Lesson တခု ရလိုက်တာကတော့ ''အသိအမှတ်ပြုမှု့''ဟာ လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဘူး ဆိုတာပဲ။
Unless Peoples who aware how to take actknowledgement and how to respect it as well as who can appreciate it and how to value it.
Otherwise I won't give my actknowledges and my valueable times as I treasure my times very much!!
''လူဟာ အထီးတည်းနေတဲ့ သတ္တဝါ မဟုတ်တဲ့အတွက် တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုမှုဟာ အရေး ကြီးတယ်''
''ကိုယ့်ကိုရန်စနေပြီ(သိအောင်တစ်မျိုး၊ မထိတရိနဲ့ တစ်မျိုး) ဆိုရင်တော့ ဒါ ကိုယ့်ကိုသူ
''ဒါပေမယ့် တကယ့် တကယ်သာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ် သွားပြန်ရင်လည်း လူတွေ အာရုံစိုက် ခံရခြင်းထက် ဥက္ခေပြု ခံရခြင်းက ပိုအေးချမ်းတယ် ဆိုတာ သိလာနိုင်ပါတယ်။''
အသိအမှတ်ပြုမှု့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကိုညီလင်းသစ် ရေးတဲ့ မှတ်သားစရာ Post ကို အချိန်ပေးပြီး အသိအမှတ်ပြု သွားပါတယ်... Keep On!!
နောက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်.တကယ်ပြောတာပါ. မနက် က kmsl ကစနေနေ.ရုံးသွားရမယ် .ဘယ် သူ ကစိတ်ကောင်း မလဲ နော.်။ ဘယ် သူ က စနေ ရုံးသွား ချင် ပါ့မလဲ. ။ Flu ကလဲ ဖြစ်ပြီး ကာစ. ။ အလုပ် ကလည်းပင်ပန်းတယ်။ အဲဒါနဲ. မနက် သူ သွားခါနီး မောင်ရယ်ပိန် သွားလိုက်တာ. ကြည်.စမ်း ပင်ပန်း လို့ထင်တယ်။ weight ချိန် ကြည့်ရ အောင် လာ.လာ. ဆိုပြီး. ဟုတ်ပါ. ပိန် သွားတယ်။ ဘာ ညာ နဲ့ ပြော ပေးလိုက် တာ အား ရှိသွားပြီး ရုံး သွားလေရဲ့.။
နန္ဒာပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်၊ အလွဲသုံးစား ပြုမှုတွေ များလာလို့လည်း Favour ကို right လို့မထင်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားက ပေါ်လာရတာပေါ့၊ လောကကြီးကိုက ဆန့်ကျင်ဖက်တွေနဲ့ ရံခွတည်ဆောက်ထားတာ ဆိုတော့ လည်း.......အင်း......
မခင်ဦးမေရေ...တခါတခါမှာ အဲဒီလိုအားဆေးလေးတွေ က Brand ကြက်ပေါင်းရည်ထက်တောင် ပိုပြီးအားရှိစေ တာ မဟုတ်လားဗျာ၊ :D
September 30, 2008 at 12:49 AM
အဲဒီလူကိုယ်စား စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ၀မ်းနည်းစရာကြီးနော်..
စာအုပ်လေးထဲမှာပါတဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးက ဒီကတည်းက ရှိနေတာပါပဲလား။
အသိအမှတ်ပြုမှု ဆိုတာ တိုတိုလေးပေမယ့် တကယ်တာသွားလွန်းတဲ့ အရာလေးတစ်ခုပဲလေ။
ဒီဆောင်းပါးရေးတဲ့ သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုလဲ မှန်းဆလို့ရတယ်။
အကို လူချစ်လူခင် ပေါတာ အဲလို စိတ်ထားလေးကြောင့်ထင်တယ်။
ရီဗျူးမှာ အကျယ်ရေးပြီးတဲ့ အတွက် ဒီမှာတော့ ဆောင်းပါးကိစ္စ ထပ်မပြောတော့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ညီမသူသူ...၊ ဒီဆောင်းပါးလေးကို အဲဒီကတည်းက ရေးထားခဲ့ပြီးတော့ စာမူ တောင်းခံရချိန်မှာ ပေးလိုက်တာပါ..၊ ရီဗျူးမှာ သေသေချာချာနဲ့ 'အသိအမှတ်ပြု' သုံးသပ်ပေးထားတာ အတွက် ဒီမှာလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေနော်..။
တလောက ရလာတဲ့ Certificate of Appreciation ကို မြင်ရချိန်မှာ အကိုရေးခဲ့တဲ့ ဟောဒီဆောင်းပါးလေးကို အရင်ဆုံး သတိရမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လာပြောတာ။း)